ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » လိင်တူချစ်သူစုံတွဲများအတွက်တိရစာန်-Friendly ဝါသနာ
အားဖြင့် Lesley Sheridan
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ပင်လယ်. 28 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
ကံကောင်းသင် - သင်ရုပ်ရှင်များသင့်ရဲ့မေတ္တာကိုတူညီသူအံ့သြဖွယ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်, ဟာသများစွာသောသဘောမျိုးရှိပါတယ်, နှင့်တိရိစ္ဆာန်များ adores. သငျသညျနေ့စွဲညဉျ့အခါစိတ်ကူးတွေထဲကအပြေးနေနှင့်တိုင်းရင်ခုန်စရာ outing စူးစမ်းကြလျှင်, အဘယ်ကြောင့်စုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ်အချို့သောပရဟိတအလှူများဖြင့်စတင်မ, ဒါကြောင့်သင်ဟာပျော်မွေ့ဝါသနာထည့်သွင်းအထူးသဖြင့်ဆိုရင်? ဒီနေရာတွင်ထွက်ကိုကူညီနိုငျသညျ့နညျးလမျးပျေါတှငျအခြို့သောအတွေးအခေါ်များဖြစ်ကြောင်း, သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်များ၏အကူအညီနှင့်အတူအားလုံး:
1.) ဓါတ်ပုံပညာ: ရေလွှမ်းမိုးအမိုးအကာနှင့်ကယ်ဆယ်မကြာခဏဆိုသလိုမွေးစားဘို့အရရှိနိုင်သူတို့ရဲ့လက်ရှိတိရစ္ဆာန်များ၏အရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်ကူးအကူအညီလိုအပ်. သင်သို့မဟုတ်သင့်မိတ်ဖက် Instagram ကိုတစ်ဦးမာစတာ Are, သို့မဟုတ်သင် aperture ၏ ins နှင့်တနေရာကိုရှင်းပြဖို့ကိုချစ်ကြ? ဒါဟာသင်အဘို့ကြီးစွာသောမထိုက်မတန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ထိုသို့အလွယ်တကူမွေးစားခံရတိရိစ္ဆာန်များ၏အရေအတွက်ထူးခြားမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏န်ဆောင်မှုကိုပူဇော်နိုင်မယ်ဆိုရင်မြင်ရဖို့သင့်အမိုးအကာကိုဆက်သွယ်ပါ, ထိုသူတို့အိမ်တွေကိုကူညီရှာဖွေ social networking site များပေါ်တွင်သူတို့အားချစ်စရာမျက်နှာတွေကိုမျှဝေ.
2.) သန့်ရှင်းရေး: စုပြုံနာစွဲ? စုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ်များလွန်းသောအရာတို့ကိုစုပြုံဒါလွယ်ကူသောကြောင့်ဖွင့်, ဒါကြောင့်အိမ်သူအိမ်သားဆေးကြောသန့်စင်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုယူနှင့်ဒေသခံအမိုးအကာနှင့်ကယ်ဆယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများကိုပေး. လက်သုတ်ပုဝါ, စောင်, သတင်းစာတွေ, ဟင်းလျာများ, placemats, နှင့်ပိုပြီးသမျှသောဤအုပ်စုများမှအသုံးဝင်သောသက်သေပြနိုင်ပါတယ်. သူတို့ကိုဖုန်းခေါ် Give, သူတို့သည်လည်းလိုအပ်ပါတယ်အဘယ်အရာကိုမြင်. သငျသညျသငျ့အိမျကိုပိုပြီးစနစ်တကျအောင်စဉ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်အတူသူတို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်.
3.) ဟင်းချက်: အသားနှင့် / သို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများထုတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းအတူတူသင့်ရဲ့အစားအစာကိုတက်အသက်ဝင်စေဖို့နိုင်ပါတယ်. Jay-Z နှင့်ဘီယွန်းစပြု, ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မသင်? ပီဇာညဉျ့အခါ ပို. စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်သက်သတ်လွတ်နှင့်အသက်သတ်လွတ်သင်အကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာပေါ်မှာကြာ, နှင့်ဤလူနေမှုပုံစံစတဲ့သစ်ကိုအချက်အပြုတ်အရသာနှင့်စားသောက်ဆိုင် Adventures ဖို့လမ်းပေးသည်. တိရစ္ဆာန်အဘို့ထိုသို့ပြု, သင့်ကျန်းမာရေးအတွက်, သို့မဟုတ်ပဲသင့်ရဲ့ညစာစားပွဲသို့ပိုပြီးအသီးအနှံထည့်သွင်းရန်. တစ်နည်းနည်းဖြင့်, နှင့်အရသာ - ကအကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ့်!
4.) ခရီးသွား: သင်၏နှစ်ဦးကိုလမ်းနှိပ်ကိုချစ်ကြ? သင့်ရဲ့ဆန္ဒစာရင်းအပေါ်ခရီးသွားလာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကဖြစ်ပျက်လုပ်ပုံရသည်ဘယ်တော့မှမ? အများစုကအမိုးအကာနှင့်ကယ်ဆယ်၎င်းတို့၏တည်နေရာနှင့်အခြားကယ်ဆယ်သို့မဟုတ်မွေးစားအိမ်တွေအကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်ပါတယ်. သငျသညျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့၏ထွက်နေတယ်ဆိုရင်, သို့မဟုတ်သင်အမြဲပြည်နယ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းမြင်လိုပါဘူးဆိုရင်, တိရစ္ဆာန်ပို့ဆောင်ရန်ကမ်းလှမ်းမှုကို, ဒါကြောင့်လမ်းကိုကိုယ့်တစ်စိတ်တင့်လျှင်တောင်မှ.
5.) ဝိဇ္ဇာနှင့် Crafts: သင်သည်နှစ်ခုစလုံး DIY စီမံကိန်းများအားချစ်မြတ်နိုးရန်ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင် (tools တွေနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအားလုံး Pinterest မိတ်ဆွေတို့ကိုနှင့်ယောက်ျားတွေ,) ထို့နောက်ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အပျော်ရွှင်စရာစီမံကိန်း. အနည်းငယ်ပစ္စည်းများနှင့်အချို့သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူ, သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာသွေတိရစ္ဆာန်များအဘို့ရာသီဥတုအေးအမိုးအကာသို့မဟုတ်ခွေးအိမ်ဆောက်နိုင်ပါတယ်. ဤသည်ကိုလည်းဆက်ဆံရေးအဘို့ကြီးစွာသောစမ်းသပ်ဖြစ်ပါသည်, IKEA ဝယ်ယူမှုနဲ့တူတာ. သငျသညျနှစ်ဦးစလုံးအနုပညာကိုချစ်လျှင်, အတူတကွတချို့အပိုင်းပိုင်းဖန်တီးရန်နှင့်အသိပညာမြှင့်တင်မှပယ်လေလံသို့မဟုတ်သုံးစွဲဖို့တိရစ္ဆာန်လူမှုရေးအဖွဲ့မှသူတို့ကိုလှူဒါန်းမည်.
6.) ကွန်ပျူတာများကို: သင် tech ကိုနားလည်တဲ့ဆိုရင်, သူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်လူမှုရေးကွန်ရက်ဆိုက်များနှင့်အတူကယ်ဆယ်သို့မဟုတ်အမိုးအကာကိုကူညီကမ်းလှမ်းမှုကို. သငျသညျ Blog သို့ဆိုပါက, အဲဒီအသိုင်းအဝိုင်းကအရင်းအမြစ်များအကြောင်းကိုအချို့သောဆောင်းပါးများကိုရေးသား, သို့မဟုတ်ထိုသူတို့အား၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် blogs များဖွဲ့စည်းကူညီ.
7.) လူမှုရေး: ငါသည်အကင်တပ်ကီတွင်ဘိုးဘွားရိပ်သာအတွက်အလုပ်လုပ်, ငါအများစုဒေသခံများကအများအပြားဧည့်သည်များမရကြဘူးသောသင်တို့၌အာမခံနိုင်. သငျသညျအလုပျ၏ဒီမျဉ်းများအတွက်လက်ျာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိပါတယ်တဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရှိပါက, လုပ်အားပေးများအတွက်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဆင်သင့်ရတဲ့၏လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန်တိရစ္ဆာန်ကုထုံးအုပ်စုစကားပြော. ငါတို့ရှိသမျှသည်တိရစ္ဆာန်အပြန်အလှန်ဘယ်လောက်နှစျသိမျ့သိ, ဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့်နှစ်သိမ့်မှုလိုအပ်၌တစ်စုံတစ်ဦးမှကမပူဇော်? အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုအမိုးအကာမှဤဝန်ဆောင်မှုများရာပူဇော်သက္ကာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ, မွေးစားကလေးတွေ, နှင့်ပြုစုလူနာများအား, လွန်း. သာကြောင်နဲ့ခွေးကဒီအလုပ်လုပျနိုငျမစဉ်းစားပါနဲ့, ဖြစ်စေ! ငါ Bunny မြင်ရပါတယ်, ဝက်, ပင်လိပ်များအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အစိတ်အပိုင်းလုပ်နေတယ်!
8.) အားကစားဆိုင်ရာ: သင်နှင့်သင့်ရည်းစားမေတ္တာကိုတက်ကြွစွာနေထိုင်မယ်ဆိုရင်, စည်းရုံးရေးနှင့်တိရိစ္ဆာန်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုအပေါ်အသိအမြင်မြှင့်ဖို့ 5K မှာပါဝင်စဉ်းစား, သို့မဟုတ်ဒေသခံတစ်ဦးကလေးမွေးစားအဖြစ်အပျက်မှာခွေးလမ်းလျှောက်ဖို့ကိုဆက်ကပ်. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပင်သင်၏ဒေသခံလူ့အဖှဲ့အစညျးအကြိုးတစ်ခွေးကလေး "မျိုးနွယ်" ဒါမှမဟုတ်ကွောငျကလေး Superbowl အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပ. သငျသညျပျော်စရာရှိခြင်းစဉ်သူတို့၏ကြိုးပမ်းမှုများအတွက်အလှူအတန်းကိုကူညီလိမ့်မယ်, ကြောင်းကို၎င်း, တစ်ဦး Win-Win င်.
9.) တွင်နေထိုင်ခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဟိတ်တိရစ္ဆာန်အမိုးအကာအစဉ်အမြဲအိမ်တွေလိုသည်ခွေးနှင့်ကြောင်အပြည့်အဝရှိပါတယ်, ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များကအရေးတကြီး euthanasia ကာကွယ်တားဆီးဖို့အမိန့်တွင်ဤတိရစ္ဆာန်များအဘို့ Foster လိုအပ်ပါတယ်. သင်တစ်ဦး homebody နေနှင့်ယာယီတိရစ္ဆာန်ရှိစေရန်အပိုအာကာသရှိပါက, သင်၏ဒေသခံတိရိစ္ဆာန်အမိုးအကာနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များကဆက်သွယ်ပါ. အသက်ချွေထက်ပိုကောင်းမယ့်အဘယျသို့ နှင့် သစ်တစ်ခု furry အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူကစားရန်လာပြီ?
6 Smarter လက်ထပ်ဘို့အချိန်မီအကြောင်းသိကောင်းစရာများ!